Magaalada Baydhabo Xarunta KMG ah ee DG Koofur Galbeed waxaa maanta tagay wafdi uu hoggaaminaya Safiirka Qadar ee Soomaaliya, waxaana soo dhaweeyay mas’uuliyiin uu kamid yahay Hogaamiye Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen.
Safiirka waxaa la socda qaar kamid ah Howlwadeenada Safaaradda Qadar ee Soomaaliya, waxaana uu la kulmay Hogaamiyaha DG Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen.
Ujeedka Safarka wafdiga Qadar ee Magaalada Baydhabo ayaa ah sidii uu u dhagax dhigi lahaa mashaariic Xukuumadda Dooxa ay u qorsheysay in ay ka fuliyo Xarunta KMG ah ee Maamulka Koofur Galbeed.
Raysul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan Magaalada Baydhabo iyo qaar kamid ah Wasiiradiisa ayaa ka qaybgalaya Munaasabadda dhagax dhigga sida Ilo xog ogaal ah ay Axadle u xaqiijiyeen.
Madaxtooyada DG Koofur Galbeed waxaa kulan gaar ah ku qaatay Hogaamiye Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen & Wafdiga ka socda Dowladda Qadar ee uu hoggaamiyaha u yahay Danjiraha Dalkaas ee Soomaaliya.
Dowladda Qadar ayaa bixisay Mashaariic lagu dhisayo Waddooyinka Muqdisho ku xira Degmooyinka Afgooye & Jowhar, dib u hirgelinta Dekedda Hobyo ee Gobolka Mudug, balse caga jiid ayaa ka muuqda fulinta mashaariicdaas oo qaarkood muddo kahor saiixday.
5 Yemeni fishermen killed in Somalia when storms hit